Fiidiyowga Dr. Plandemic Judy Mikovits waa dhacdo dhacdo 201 ah oo ah been abuur wararka been abuurka ah (fiidiyow ah): Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 11 May 2020	• 30 Comments
Waa inaad aragtay, dukumintiga dukumintiga ah ee Plandemic ee haweeney ah Dr. Judy Mikovits ayaa soo wacaya. Waxaa la sheegay in ay xidhnayd dhawr maalmood isla markaana xidhay iyada oo aan wax maxkamad ah la soo taagin. Markii la siidaayay ka dib, waxay la timid dhammaan noocyada sheegashooyinka ku saabsan fayraska iyo shatiyada taranka ee Dr. Fauci ayaa la sheegay in loo isticmaalay in uu galo dambiyo ka dhan ah aadanaha.
Ayaa isagu Dhacdadii 201 Machadka Johns Hopkins, ogaada in la dagaalanka wararka been abuurka ah ay qeyb muhiim ah ka ahayd jilitaanka cudurka faafa ee coronavirus. Annaga ayaa nala qabqabanayaa.
Sida ugu wanaagsan ee ugu dambeyntii lagu dilo mucaaradka waa in la bilaabo sheeko been ah oo umuuqata mid aad u fudud oo la isku halleyn karo, maxaa yeelay jilaayaha hoggaamiyaha ah ayaa si fudud ula yimaada sheeko "cod wanaagsan". Laakiin dhanka kale Forbes ayaa galaya maqaalkan ballaaran Mikovits wuxuu ahaan lahaa qof u ololeeya tallaalka. Taasi waxay noqon kartaa run, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa in haweeneydan ay kujirto mushaharka Bill Gates si ay u sameyso wixii aan marar badan ka wada hadalnay halkan: ciyaar oppoisition xakameysan (ficil).
Marka laga hadlayo mucaaradka la xakameynayay, bambooyinka ayaa had iyo jeer lagu dhisaa salka hoose. Waxaan hadda maqlayaa waxaad moodeysaa:Ah, Vrijland, jooji hadal-hayntaada mucaaradka ee aad maamusho!Aad ayaan uga xumahay, laakiin ma aragtay caddeyn la taaban karo oo la soo bandhigay - marka laga reebo dareenkaaga xanaaqa inuu xanaaqsan yahay? Xaq ma leh Taasi waa inay ku cabsi galisaa. Waa inaad sidoo kale laga baqaa in marwada ay durba heshay warbaahin badan iyo warbaahinta bulshada.
Gaar ahaan, warbaahinta kale waxay si weyn u dardar gelineysaa sidoo kale waxaad arki kartaa fiidiyowga si xamaasad leh loogu wadaago Facebook iyo warbaahinta kale ee bulshada. "Hagaag, maxaa ka khaldan taas?Ma jiraan wax khalad ah oo taas ka jira, miyaanay ahayn in aan marar badan ka digay jiritaanka mid ciidan weyn oo warbaahinta bulshada ah. Hadday ciidankaasi kaa caawin karaan dejintaada, way ku farxi doonaan inay sidaas sameeyaan. Haddii markaa faafinta pawn ee la xakameeyo uu raaco oo aad adigu markhaati ka tahay, way ku garaaci karaan.
Qayb ka mid ah Dhacdadii dhacdada 201 ayaa ahayd in wararka been abuurka ah in lala dagaallamo. Sidee ugufiican ee aad uqaban kartaan tan? Adoo bilaabaya wararka been abuurka ah isla markaana la soconaya baahintiisa (Xogta Weyn) oo si sax ah loo cabirayo waxyeelada iyo aragtida qofka ka jawaaba ama aan ka jawaabin. Nidaamyada Xogta Weyn waxay cabirayaan jawaabtaada waxayna la socon karaan saameynta bulshada ee ku saleysan wicitaanadaada iyo kormeerayaasha kormeerayaasha taleefankaaga (si otomaatig ah u maraya qoraallada AI).
Waxaan mar kale aragnaa istiraatiijiyadda shabakadda badbaadada, halkaas oo inta dhaleeceeyayaasha ugu badan ee suuragalka ah loogu tuuro dabin, si ay ugu dhakhsaha badan u oran doonaan "Waxba kama aaminsani - haddii aysan ka imaan warbaahinta guud".
Soodhawrka xiriiriya: forbes.com
Qeybta badbaadada QAnon: PsyOp smart si loo eego fikradaha muhiimka ah
Ku celcelinta: 5G iyo corona waxba kuma leh xiriirkooda!
Fadlan la soco: Dukumentiga Covid-19 Janet Ossebaard (Ninefornews) waa been abuur wararka been abuur ah
Tags: 201, ugu fiican, la xakamey, Dr., dhacdo, been abuur ah, Fauci, featured, la xakamey, Judy, Mikovits, wararka been abuur ah, news, mucaaradka, mucaaradka, Plandemic, ka, video, jidka
11 May 2020 ee 15: 20
Waa maxay 'mikovits' CV? Miyaa runtii loo yaqaan Mikovits?
Markaa waxaan ogahay ku filan naftayda. Had iyo jeer way joogaan, cabsi!
11 May 2020 ee 17: 45
idd mikowitz, kaufman… yaanan wax badan i dhihin😷
11 May 2020 ee 18: 15
Lydia Roosje ayaa qoray:
11 May 2020 ee 15: 26
Waa nooc wasakh ah laakiin dagaal caqli gal ah. Mar waxaan rajeynayay in Q (iyo Trump) runti ay baabi'in doonaan gobolka qoto dheer. Sababta oo ah waxaan ku dhawaaqay runta, laakiin waxa ugu dhakhsaha badan u rogay garsoor, waxaan si buuxda ugu dhacay dabinka taas micnaheedu waa in waxkasta oo aan dhaho hadda gebi ahaanba waa la igu caayaa. Marka waa muhiim in la tilmaamo dadka iyagu hadda u toosaya goobta miinada ee kala-baxa.
Waxaan u maleynayaa Andrew Kaufman inuu yahay mid la isku halleyn karo, waxaan rajeynayaa inaanan khalad aheyn markale…
11 May 2020 ee 17: 11
Waan ka xumahay, laakiin waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan tafatirka hiddaha internetka ayaa si aad ah loogu sharxay qodobo dhowr ah oo ka jira websaydhka, sidaa darteed maahan inaad ku aqrisato akhristaha kanaalada kale adiga laftaada. Ma ogi in macluumaadkaasi sidoo kale lagu qasay disinfo.
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad ogaato:
11 May 2020 ee 17: 25
Andy Kaufman wuxuu sharxayaa isku xirka 2-aad aad iyo aad ayuu u fiican yahay in fayrasyadu ay kaga duwan yihiin cudurada caadiga ah ee dibedda. Germ vs terrain theory. Fayrasyada waligood lama go'doomin, xittaa fayraskan, sidaa darteed baaritaanadaasi sax maahan, iwm. In kasta oo xiriiriyaha teknolojiyada CRISPR ee tafatirka taranka uu sharraxayo wax walba oo ku saabsan tallaalka, waxa ku saabsan waxa fayrasku run ahaantii yahay, waxaan helay macluumaadka Kaufman waa mid laxiriira. Ilaa uu waliba yahay wakiilka disinfo, laakiin uma maleynayo inuu yahay.
11 May 2020 ee 17: 48
Hagaag sifiican, markaa waan baran doonaa
11 May 2020 ee 19: 34
Waxaan u maleynayaa inaad dhowaan diyaar u tahay, nasiibdarro. Waxaa lagu soo daray wareysiga 2 saac ee London Real London. Sidaas oo kale aniga waxay ila tahay been abuur aniga lafteyda. Waxaa wali jooga wax aad looga xumaado. Sababtoo ah wuxuu runtii umuuqdaa mid qancinaya.
11 May 2020 ee 23: 06
Soul Sababta Xanuunka 'Björn Eybl Sababtu waxay ku saleysan tahay shuruucda cilmiga dabiiciga ee Dr Hamer oo uu baray biologika Nederland. Buuggu wuxuu sheegayaa waxyaabaha soo socda ee ku saabsan fayraska, hargabka iyo dhibaatooyinka neef-mareenka (inta badan calaamadaha nafta halis geliya ee corona marka loo eego daawada guud).
Illaa maanta, ma jiro fayras si toos ah loo ogaadey. Fayrasyada waxaa si aan toos ahayn loo arkaa iyadoo ku xirida ama aan ku xirneyn borotiinnada borotiinnada kale. Ma jiraan caddayn la soo gabagabeeyey oo ah in fayrasyada la sheegay inay keenaan cudur. Shaki la'aan, tiro badan oo ka kooban borotiinno protein (globulin) ayaa laga helaa dhiigga iyo dareeraha kale ee jirka. Globulins-kaani waxay u egyihiin waxa loogu yeero 'virus'. Masruufka 'cerebrum' waxaa laga yaabaa inuu la shaqeeyo borotiinadan si dib loogu dhiso unugyada ectodermal ee dhaawacma marxaladda bogsiinta.
Daawooyinka caadiga ah, waxa lagu kala soocay 'halis, hargab dhab ah' iyo 'hargab aan waxyeelo lahayn'. Sifooyinka halista ah waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin “hargab dhab ah ', hababka fudfudud waxaa loo diidayaa inay yihiin' infakshan ifilo 'ama' qabow '. Marka loo eego qaanuunka bayoolojiga ee dabeecadda, waxaan tixgelinaynaa oo keliya astaamaha bukaanka:
Xanuunka addinka = isku dhaca isku-kalsoonaanta, wejiga bogsashada
Qabowga caadiga ah = isqarxinta ama iskahorimaadka urta, wajiga bogsashada
Cune xanuunka = ma doonayo inaan wax liqo ama wax ku tufo, wajiga bogsashada
Larynx = iskahorimaad cabsi la'aan ama hadal la'aan ah, wajiga bogsashada
Avian, doofaarka, iyo hargabka cusub ayaa ah 'ololeyaal' WHO ay maamusho.
'Infekshannada hargabka daran', sida cudurrada faafa, daawada caadiga ahi waxay isticmaashaa dawooyin daaweyn ah sida Tamiflu ama Relenza (kiimikada xakamaynta kimikalka), tallaallada, iyo sidoo kale dhiig-karka.
Khilaafaadka: Khilaafka Dhulalka (Khilaafka labka ah, weerarka) ama Khilaafaadka Argaggixisada (marinka haweenka, ka bixitaanka). Tani waxay kuxirantahay jahwareerka, heerka hormoonka iyo iskahorimaadka hore. Dadku waxay ka baqayaan inay lumiyaan dhulkooda (tusaale ahaan lammaanaha ama shaqada) ama meel ka mid ah dhulka (tusaale ahaan booska ama darajada).
Qalabka 'Tissue': xabka xiidmaha iyo dabaysha xuubka dheecaanka leh, saxanka epithelium, ectoderm
Firfircoonaanta Khilaafaadka: Yaraanta unugyada xuubka xiidmaha iyo sambabada, badanaa lama ogaan karo.
Dareenka nafleyda: Isgoyska-isugeynta wuxuu kordhiyaa dhexroorka. Sidaas darteed, hawo wanaagsan oo badan ayaa la nuugi karaa oo la dejin karaa si sifiican loogu difaaco dhulka.
(Xayawaanka, la qabsiga bayoolojiga ayaa macno samaynaya. Bini'aadamka maahan sababta oo ah isku dhacyadeenu badanaa waa cilmi nafsi ahaan sidaa darteed isku hagaajinta bayoolajiga micno malahan, Si kastaba ha noqotee, jirkeenu wuxuu u dhaqmaa sida xoolaha oo kale. Maskaxdayagu ma oga kala duwanaanshaha u dhexeeya cilmiga noolaha iyo cilmu-nafsiga. )
Marxaladda bogsashada: Dib-u-dhiska xuubka xabka ee wadnaha oo ay bararto kuna keenaya adkaanta xabadka waxaa la socon kara qufac iyo qandho.
Khilaafaadka kor ku xusan waxaa sababi kara warbixinnada wararka iyo tallaabooyinka. Marka la fududeeyo tillaabooyinka, khilaafaadkaan waa la xallin karaa dadkuna waa bukoon karaan.
Ku dhawaad ​​dhammaan cudurada waxay ka soo baxaan gudaha iyada oo loo marayo isku dhacyo nafsi ah oo sababa hagaajinta nafleyda ee jirka (korodh ama yareeya unugyada ama shaqada oo lumisa). Dib-u-habeeyntaas waxaa lagu hagaajiyaa iyadoo la kaashanayo unugyada-yar-yar (fangaska iyo bakteeriyada fungal waxay jebiyaan unugyada, bakteeriyada iyo 'fayrasyada' waxay dhisaan unugyada) taas oo ay soosaarto jirkeenna. Ka-reebitaanku waa: sumowga (tusaale sumaynta cuntada), farsamo-yaqaan (tusaale. Laf laf jabtay) iyo hiddo-wadaha (tusaale ahaan cilladda Down). Wadajir u cudur qabta ayaa u sabab ah iska hor imaad wada jir ah oo la soo maray. Tallaabooyinku waxtar ma leh sababta oo ah faddaraynta sida naloo baray sax ma aha. Tallaabooyinka ayaa ah kuwo waxyeello leh maxaa yeelay waxay sababi karaan iskahorimaad sidaas darteedna jirro. Kuwa awooda ayaa raba in aan aaminsanaano in faddaraynta iyo cudurku ay ka yimaadaan banaanka iyo in aan leenahay nidaam difaac oo leh xusuusin lagu xakameeyo cudurada faafa. Tani waxay u oggolaaneysaa iyaga inay bixiyaan xal dibadeed. Tallaalka ay rabaan inay ku biiraan aadanaha iyo Sirdoonka Artificial.
12 May 2020 ee 11: 08
Buuggaas ma la qoray ka hor ama ka dib teknoolojiyadda CRISPR? Sababtoo ah taasi waxay noo oggolaaneysaa inaan xoogaa yar u eegno heerka DNA iyo RNA.
12 May 2020 ee 11: 43
Buugga "Soul Sababaha Cudurada" ayaa la daabacay 2010.
Dr Hamer wuxuu helay sharciyada cilmiga nafleyda ee dabayaaqadii 70meeyadii.
Waxaan la yaabanahay inay habboon tahay markii tikniyoolajiyadda CRISPR laga helo iyadoo loo eegayo ilaha rasmiga ah. Ku dhawaad ​​macluumaadka oo dhan waa la hubiyay. Laga yaabee inay farsamadan hore u jirtay ka hor khudbadda rasmiga ah.
12 May 2020 ee 13: 53
@Martin, daraasadda xiisaha badan leh ee la xiriirta RNA / luciferase. Waxaan khiyaanay tani waa qayb ka mid ah tallaalka cusub. Nasiib darrose uma arki karo baaritaanka buuxa, waxay ku kacaysaa lacag.
Qaabka loo yaqaan 'incPRINT (protein-ka unugyada - is-dhexgalka RNA) ayaa ka adkaata caqabadahaas iyadoo la adeegsanayo luciferase si hufan loogu muujiyey inay ku xiran tahay sumadda MS2-ka sumadda RNA ee loo yaqaan' borotiinka maqaarka ee loo yaqaan 'MS2CP' . Haddii is dhexgalka u dhexeeya tijaabada RNA iyo borotiinka tijaabada uu ka dhaco unugyada, waxaa lagu cabiraa luminescence ka dib markii la isticmaalayo unugyada unugyada iyo isdifaaca unugyada borotokoolka.
12 May 2020 ee 16: 16
+ Iftiinka cagaaran 🤔hmmmm
Cilmiga cagaaran ee GreenLight wuxuu sare uqaaday $ 17m si loogu yareeyo soosaarka mRNA ee loogu tala galay musharaxiinta talaalka COVID-19
Luciferase waa magac caan ah oo loogu talagalay noocyada enzymes-ka oo badanaa sababa bioluminescence ee dabiiciga ah. Magaca waxaa laga soo qaatay Lucifer, oo macnaheedu yahay "xamuul fudud". Tusaalaha ugu wanaagsan ee loo yaqaan waa luciferase oo ka soo ifbaxa Photinus pyralis iftiinka leh. Xasaasiyadaha luminescent, iftiinka waxaa soosaaray oksidaynta luciferin (midab) iyo adenosine triphosphate (ATP).
12 May 2020 ee 18: 14
sida muuqata waxaa la akhriyaa Salmon.
Bees ayaa qoray:
14 May 2020 ee 20: 51
Buugga Soul Sababta Cudurka ayaa lagala soo bixi karaa si bilaash ah iyadoo ah buugga E-buugga ee turjumaanka: https://zielsoorzakenvanziekte.be/gratis-download-boek-zielsoorzaken-van-ziekte/
Marcel Korver ayaa qoray:
11 May 2020 ee 16: 17
Fadlan bixi macluumaad dheeri ah oo ku saabsan bayaankaaga ku saabsan Dr. Judy Mikovits, sababta oo ah waa marqaati aad u muhiim ah oo la xiriirta musuqmaasuqa ka dhex jira wershadaha tallaalka waxayna inta badan la socotaa shakhsiyaad kale oo muhiim ah sida Robert F. Kennedy, Del Bigtree, Dr. Andrew Wakefield iwm kuwaa oo aan ogayn in iyada sheekadu dhab maaha !!!!
11 May 2020 ee 17: 06
Iyagoo aan ogayn in sheekadeeduna ayan dhab ahayn ama in onkodku si fiican u ogyahay in sheekadu aanu dhab ahayn, laakiin ay gacan ka gaysato buuxinta shabaqyada nabdoon ee shabaqyada waaweyn ee badbaadada si ay u daadgureeyaan dhammaan maraakiibta, si xeryaha dib-u-waxbarasho loo buuxin karo ama Dadku waxay ka fikiri doonaan hadda ka dib "Weligaa ha ku mashquulin dhaleeceyntaas, si fiican ayey u sii ogaan doonaan"
12 May 2020 ee 08: 21
Markaa tani waa shabaqa nabadgelyada ee ugu weyn maxaa yeelay Robert F. Kennedy wuxuu shaqeynayay sanado iyo Del Bigtree oo ka tirsan Highwire runtii shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Dabcan waan su’aali karnaa wax walba, laakiin saameynta shaqadooda sida Vaxxed runtii waa in malaayiin dad ah ay hurdada ka kiciyeen.
Haddii tani sidoo kale ay tahay shabakad badbaado, markaa tani waa mid ka mid ah saamiga ugu weyn.
12 May 2020 ee 11: 11
Waxaan kaa caawinayaa inaad rajaynayso inaysan ahayn, laakiin aan iska jirno feejignaan.
11 May 2020 ee 17: 14
Waan ku garanayaa, uma dhahayo badbaadada shabaqa kumbuyuutarka run kuma sheegi karo runta. Mana dhahayo waxaan ahay talaal talaal. Waxa aan idhaahdaa ayaa ah istaraatiijiyada badbaadada badiyaa waa tan 'runta lagu soo jiito', laakiin waxaa jira bam hoosta ku jira.
Fiidiyowgan sawir gacmeedka ah waxaan ku sharraxayaa:
12 May 2020 ee 08: 22
waan arki doonnaa haddii ay jirto laba-laab hoose ama maya… bal aan rajeyno maya
Gerke Teitsma ayaa qoray:
11 May 2020 ee 18: 10
haweeneydan ayaa sheeganeysa inay kujirto fayraska HIV. go'doon .. taasi waa mid aad u yaab leh. sidoo kale waxay ka shakisay inay ahayd inay afkeeda xidho laakiin hada si lama filaan ah ayaa loo ogol yahay inay hadasho.
11 May 2020 ee 19: 50
In yar, kama welwel qabaan runta ama runta. Tan micnaheedu maahan muhiim. Haddii ay ku jiraan wax xaqiiqooyin ah ama run ah gabi ahaanba, waxaa kaliya looga golleeyahay in laga leexiyo kalsoonidooda khayaanadooda. Hadafka ugu weyni waa Hen, Confused, sida
dadka caadiga ah Waa wareersan yihiin, mar dambe ha ilaawin waxa la rumeeysto, tani waxay curyaamineysaa maskaxda dadka caadiga ah, addoomaha. Qofka curyaanka ahi waxba ma qabo oo waa wax aan waxba tarayn. Sida saxda ah waxay rabaan. Sidaas awgeed jahwareerka ayaa uga fiican iyaga sababta oo ah waxay had iyo jeer u jeedsan karaan dhinaca saacad ka dibna bidix mar kale iwm. In aan lagu qabsan karin dhaqankooda cawaaqib xumada ah, waa sida gudoomiyeyaasha.
Taasi waa sababta aad badanaa u aragto dhowr wiil oo qoraalka ah oo sidan dhaha, wiilka kale ayaa sidaas leh wiilkaasna wiilka ayaa leh sidaas iwm.
11 May 2020 ee 20: 17
Sida saxda ah .. waa nooc hypnosis ... "xaggee baan eegaa, madaxaygu wareersanaadaa"
Taasi waa sax marka maskaxdaada miyir-qabka ah la diyaarin karo.
12 May 2020 ee 13: 02
Mawduuca aad ogtahay inuu soo socday, aad u xoog badan.
Qof walba wuxuu u cararaa inuu qaniinyo, Pied Piper ee Hammering oo ka jawaabaya saacad gudahooda haddii wax qalad ah ku jiraan gelitaanka aad sameysid. (markaa sidee?)
Waxaa jira ciidan dhan oo si wanaagsan kuu adeegi doona!
Caawa waxaan gacmahayga balaaran ku ridiyey korkaaga dhammaantiin kuwa kor ku xusan!
W Hörchner ayaa qoray:
12 May 2020 ee 13: 24
Iskeed, qodobka Forbes sidoo kale waxaa loo arki karaa dacaayad. Wax kasta oo aad aqriso waa inaad rumeysan tahay ama aamintaa inay run tahay. Haddii aad aqrinaysid tixraacyada qaar way adag tahay in go'aan laga gaaro in runta la qorayo iyo in kale.
Tusaale ahaan, waxaa la sheegayaa inay iska sheegi laheyd nafteeda halkii la qaban lahaa (guriga). Haddii aad ka raadiso google waxaad sidoo kale heli doontaa warar is burinaya.
1) https://abcnews.go.com/Health/Wellness/chronic-fatigue-researcher-jailed-controversy/story?id=15076224 waxay qortay inay iska qortay talaadada.
Maqaalkan wararka waxaa la daabacay Diseembar 2, 2011.
2) https://mynews4.com/news/local/judy-mikovits-turns-herself-in waxay qortay inay is qortay Isniinta.
Maqaalka wararka waxaa la daabacay Nofeembar 29, 2011. Fiidiyowga warka ayaa markaa muujinaya in isla maalintaas la sii daayay, taas oo aan run ahayn iyada oo ay jiraan warar kale oo sheegaya in la xidhay dhawr maalmood.
3) https://www.sciencemag.org/news/2011/11/controversial-cfs-researcher-arrested-and-jailed Sheriffs oo ka tirsan Gobolka Ventura, California, ayaa xidhay Mikovits shalay kadib markii lagu soo eedeeyay eedaymo ah inay ka baxsatay cadaalada.
Maqaalkan waxaa la daabacay Sabtida, Nofeembar 19 (10 maalmood maqaalkeyga mynews4).
Shalay ayaa markaa noqon doonta Jimcaha Noofembar 18. Wali way ka duwan tahay labadii fariimood ee hore. Ma ogaan karo haddii ay jireen dhacdooyin badan sida qabashada ka dibna si ikhtiyaari ah u soo sheega.
Maqaal kujira Sciencemag.org (https://www.sciencemag.org/news/2020/05/fact-checking-judy-mikovits-controversial-virologist-attacking-anthony-fauci-viral#) si looga jawaabo waxa Mikovits yiri:
Mikovits: Waxaan ahaa geesi geesi ku jira xabsi, iyadoo aan wax dacwad ah lagu soo oogin.
Qareenka degmada ee gobolka Washoe, Nevada, wuxuu dacwad ka dhan ah Mikovits u gudbiyay dacwad ay ku eedeysay inuu si sharci darro ah u qaatay xogta kombiyuutarka iyo hantida la xiriirta ee WPI. Eedeymaha ayaa loo tuuray, qeyb ahaan sababtoo ah dhibaatooyin sharciyeed oo soo foodsaaray loo shaqeeyeheedii hore. '
Qodobka 3-aad wuxuu ku leeyahay, waxyaabo kale:
'Afhayeen u hadley Xafiiska Sheriff County Sheriff County wuxuu u sheegay ScienceInsider inaysan soo saarin ruqsadda, sidoo kale waaxda booliska ee Reno ama Sparks. Wuxuu yiri waxay ka imaan kartaa mid ka mid ah dhowr hay'adood oo federaali ah oo ku yaal Washoe County. '
Uma muuqato inay wax waliba cad yihiin. Intaa waxaa u dheer, aragtideeda (oo dambiyada lagu soo tuuray mar dambe), waa la xiray iyada oo aan wax dambi ah lagu soo oogin. Uma maleynayo in booska noocan oo kale ah uu yahay wax la yaab leh. 'Filimka' waxay sidoo kale muujineysaa inay la xiriirtay xatooyo hanti oo la sheegay.
Waxaa kale oo suurogal ah in la yidho in sawiro sawirro iyo / ama filim filim ah oo kooxda SWAT ah la adeegsaday oo aan wax xidhiidh ah la lahayn qabashada. Tani waxay ku dhacdaa qadka golaha ee warbaahinta. Jar, dhajiyay oo nolosha lagu abuuray. Iyo wax kasta oo aad aragto iyo / ama aad ka aqriso warbaahinta waxaa loogu talagalay inay ku siiso dareen gaar ah. Tani sidoo kale waa kiis ku saabsan barnaamijyada sida Zembla iyo xitaa Adeegga Qiimaynta. Sidoo kale ka arag sawirka dusha sare ee maqaalka Forbes. Hadeysan taa looga jeedin in la abuuro dareen…
Hubinta xaqiiqada, deyn-siinta ... ereyada qaab dhismeedka loo adeegsaday in lagu tilmaamo qoritaanka ama runta lagu hadlo. Sida 'fikirka shirqoolku' waa sanduuq uu qofku ku siinayo eedayn xun. Xeeladaha oo dhan.
Waxaan aaminsanahay in fikirkayaga badankiisu uu ku saleysan yahay aaminaad, xukun iyo aaminaad. Waa maxay xaqiiqada mid, tan kale waa inay u qaadataa inay dhab tahay. Iyo waxa fikrad shirqool u ah hal qof waa run qof kale. Maxay tahay xigmadda qof qof u tahay qof waalan.
ClairVoyance ayaa qoray:
17 May 2020 ee 05: 07
W Horchner, waad ku mahadsantahay iskuxirkaaga iyo faallooyinkaaga.
Wali ma eegin xiriiryada laakiin waxaan horeyba u arki karaa inaad ogtahay sida haresku usocoto.
12 May 2020 ee 15: 54
hada waxoogaa war culus ah, nasiib wanaag Greta ayaa mar kale soo kabsaday KUCH😷
12 May 2020 ee 19: 06
Halkan waa xaqiijinta qayb weyn waxa Martin uu wacayay sannado. Xaqiijinta ugufiicanna waa dhamaadka, filimku wuxuu socdaa 19 daqiiqo, laakiin 3da daqiiqo ee ugu dambeysa waxaa loogu talagalay dhammaan akhristayaasha iyo wada shaqeynta gobolka IMBers waxay dhahdaa bye bye, kasoo horjeedka waxaad u maleyneyso inaad hadda heysato. Haa haa sidoo kale reerkaaga. Maalin maalmaha ka mid ah waxaad noqotay wax aan macquul aheyn in sayidyadiinnii. Ka dib markaa waxaad la kulmi doontaa qaddarka sida dadka kale oo dhami. Waxaa laga yaabaa inuu ninkani ku siiyo xoogaa waxgarasho ah. In kasta oo ay u badan tahay inaysan sidaas noqon doonin, maxaa yeelay waxaad ku dhegan tahay shabakaddaada. Martin waxaad ka mid tahay kuwa tirada yar ee u dagaallama xorriyadda dhabta ah. Waad ku mahadsantahay dadaalkaaga. In kasta oo IMBers ay wali u haystaan ​​inay geesiyaal u yihiin sayidyadooda. Wax walbana way dhammaadaan.
17 May 2020 ee 04: 59
Halkan waxa ku jira xogaha qaarkood ee Tony Heller;
« Weerar culus oo lagu qaaday bogga internetka ee Martin Vrijland, laakiin waan sii wadi doonnaa!
Waqtiga isbedelka weyn iyo wareegga weyn: saxeex codsiga »
Wadarta booqashooyinka: 2.501.203
Oxel op Corona Crisis Covid-19 waa mid lagu xasuusto 2003 fayraska MS Blaster ee loogu magac daray Bill Gates
Riffian op Corona Crisis Covid-19 waa mid lagu xasuusto 2003 fayraska MS Blaster ee loogu magac daray Bill Gates